Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Gunyana 09, 2021
Zimbabwe yotarisira dzimwe nhomba dzekudzivirira Covid-19 dzinosvika mamiriyoni maviri nechidimbu kubva ku China, dzekutanga zviuru mazana mashanu dzeSinopharm dzichitarisirwa kusvika munyika masikati anhasi.
Vanhu gumi nevana vakafa nechirwere che Covid-19 nezuro, uye vamwe vanhu zana nemakumi matatu nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Makambani omanikidza vashandi vawo kubayiwa nhomba yeCovid-19, vanenge varamba vachimanikidzwa kuenda pazororo vasingabhadharwe kwenguva inotarwa nekambani yavanoshandira ZCTU ichiti zviri kuitwa izvi zvinotyora kodzero dzemushandi.
Zimbabwe inotambira mamwe mabhazi makumi mashanu eZupco ayo ari kutarisirwa kurerutsa dambudziko rezvekufambisa munyika.
Vagari vekuUzumba mudunhu reMashonaland East vonyorera tsamba yenyunyuto pamusoro pekambani yeHeijin kumukuru anoona nezvekupiwa kwemarezinesi ezvezvicherwa pamwe nebazi rezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reEnvironmental Management Agency of Zimbabwe vachiti havasi kuda kuti kambani iyi ishande munzvimbo dzavanogara
Mauto emuGuinea akapidigura hurumende yaVaAlpha Conde nemusi weSvondo, sezvakaitikawo muZimbabwe muna 2017. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti maitiro akadai ari kudzosera Africa kumashure munyaya dzehutongo hwejekerere.
Muchirongwa cheWomen’s RoundTable na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi munyika panguva iyo Zimbabwe iri parumananzombe nekuda kwechirwere cheCovid-19.